Android 10 inosvika iine rima nyowani modhi uye mhinduro dzakapusa | Linux Vakapindwa muropa
Como isu mberi Musi waAugust 22, Google yakabvisa chihwitsi kubva kumazita ezvinyorwa zveayo mobile mobile system uye yakaburitsa Android 10 kuoma. Iyo nyowani vhezheni inovimbisa kushandisa shoma bhatiri, uye kuti vabudirire izvi ivo vatangisa rima tema kune rese rinoshanda system. Uye ndeyekuti mazhinji mafoni eApple epakati-akakwirira renji anoshandisa OLED zviyero zvinoshandisa mashoma simba kana mavara matema achishandiswa; mapikisheni asina kubviswa haatore bhatiri.
Kupemberera kuvhurwa, kambani yeakakurumbira injini yekutsvaga yakagadzirisa peji Android webhu uye atangisa yakatarwa yeiyo Android 10 yatinoona mairi nhau dzayo dzakatanhamara. Pazasi kurudyi rwepeji nezve yazvino kuvhurwa kweiyo diki Android system isu tine chiratidzo kubva kwatinogona kuisa peji mune yakasviba modhi, pamwe kuti tikwanise kuona kuti zvese zvaizotaridzika sei kana tikazvishanyira kubva kune mudziyo une Android 10 iyo nyowani "Rima Rima".
1 Android 10 zvakakosha
1.1 Rarama Caption
1.2 Smart anopindura
1.3 Gudzazwi gudzanzwi
1.4 Kufambisa kwechiratidzo
1.5 Chimiro chakasviba
2 Android 10 inovandudza rutsigiro rwemidziyo inopetwa
3 Focus Mode, Android 10 ichakubatsira iwe kutarisa pane izvo zvinokufadza
4 Ikozvino yave kuwanikwa paPixels, munguva pfupi pane mamwe madhivhiri anoenderana
Android 10 zvakakosha
Rarama Caption chinhu chitsva icho wedzera zvinyorwa pasi nekamwe tap. Kamwe Live Live Caption yashandurwa, zvinyorwa zvidiki zvichaonekwa pasi pechidzitiro chemavhidhiyo, podcasts, uye odhiyo mameseji. Basa racho rinowanikwawo mune zvaro zvemukati uye zvese zvinoshanda pasina kubatana kweinternet. Chaizvoizvo mutengesi (izvo zvandinovimba zviri nani pane Teregiramu).
Kana isu tagamuchira meseji, Android 10 ichaita zvinopfuura kupa mhinduro. Zvakare inotikurudzira zvekuita. Semuenzaniso, kana tiri kutaura nezvekudya kwemanheru, foni inozopa mhinduro (sekuti "ok") uyezve ichatiudza nzira yekuenda kuresitorendi neGoogle Mepu. Ivo vanovimbisa kuti ichi chimiro chinowanikwa mune yechitatu bato maapplication.
Basa iri ichawedzera kurira kweiyo iPhone, icha kusefa kunze kweruzha rwekunze uye kugadzirisa toni yakanaka kuti inzwike pamwe nekugona. Izvi zvinoshanda pakuteerera podcast, kutarisa mavhidhiyo, kana patinenge tichitaura mukamuri rakazara. Chinhu chega chatinofanirwa kuita kuisa pamahedhifoni kuti tinzwe zvese zvakajeka. Unogona kuyedza Ruzha Gudzazwi ne Google Play app.
ari zviratidzo zvakagadziridzwa mushanduro iyi. Iye zvino unogona kudzokera kumashure kana kumberi, dzokera kumba skrini kana swipe kumusoro kuti uone yakavhurika mafomu. Uye ese akanyanya kutsetseka.
Ini ndinofunga basa iri rinoda tsananguro diki. Icho chinhu icho chatakaona mune akawanda maficha emakore uye ikozvino isu tichava nawo mukati meiyo sisitimu yekushandisa. Sezvatatsanangura, pane OLED kuratidza, nhema inochengetedza bhatiri.
Android 10 inovandudza rutsigiro rwemidziyo inopetwa
Iyo nyowani Android chiverengero futi inovandudza rutsigiro rwekupeta zvishandiso. Sekutsanangura kunoita Google, «Mafolder uye 5G zvishandiso zvinongowanikwa chete paApple. Saka unogona kusangana neazvino uye akakura maficha pane zvishandiso zvinopeta, zvinoshanduka uye zvinokurumidza kukurumidza kupfuura nakare kose".
Kune rimwe divi, vanewo kuvandudza zvakavanzika kuwedzera mitsva uye nehungwaru kutonga izvo zvinotibvumidza isu kusarudza kuti riini uye kupi kwatinogovana iyo data kubva kune yedu kifaa. Chengetedzo yakagadzirisazve, kana ichavandudza nemagadzirirwo ekuchengetedza ayo mu Android 10 anosvika nekukurumidza uye nyore kupfuura nakare kose: ivo vanosvika vakananga kubva kuGoogle Play.
Focus Mode, Android 10 ichakubatsira iwe kutarisa pane izvo zvinokufadza
Zvakare inowanikwa se Google Play app, Android 10 inosvitsa imwe nyowani nzira ichatibvumidza tarisa pane zvatinofarira. Izvozvi iri mubeta uye ichatibvumidza isu kusarudza mamwe maapplication kuti ambomiswa kwenguva pfupi. Izvo chaizvo senge Usakanganise maitiro, asi nekumwe kumonyoroka.
Pakupedzisira, isu tine iyo Family Link, izvo zvichatibvumidza kutungamira nhengo dzemhuri yedu, kunyanya vadiki, kuti vadzidze, vatambe uye vaongorore netiweki isu tichigadzirisa mabhaisikopo ekushandisa. Izvo zvichatibvumidzawo kuti tione kwavari.
Ikozvino yave kuwanikwa paPixels, munguva pfupi pane mamwe madhivhiri anoenderana
Android 10 yakatanga kusvika paGoogle Pixels nezuro. Semazuva ese, kuvhurwa kuri kuita zvishoma nezvishoma, saka zvishandiso zvinoenderana zvichazvigamuchira zvishoma nezvishoma. Wakatogamuchira here? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android 10 inosvika iine rima nyowani modhi uye smart mhinduro